Xiaomi Mi 8 Ntorobịa ga-eweta na Septemba 19 | Gam akporosis
Izu a, Xiaomi Mi 8 Ntorobịa agbaala agbapụ kpamkpam, na enweghi otutu ntule. Nke a bụ ihe na-egosi na ụdị ọhụụ a nke ụdị Mi 8 ekwesịghị iwe ogologo oge ịbata. Ihe yiri ka ọ ga-eme n'oge na-adịghị anya, n'ihi na ekwenyelarị ụbọchị nke ngosi nke ihe nlereanya a. Ihe omume nke Xiaomi n'onwe ya ekwuputala site na posta.
Yabụ na mgbakwunye na ikwenye ịdị adị nke Ntorobịa Xiaomi Mi 8, anyị nwekwara ụbọchị ngosipụta gị, ma ọ dịkarịa ala maka ahịa China. Ọ ga-eme n'oge na-adịghị anya.
Ebe ọ bụ ụbọchị a họọrọ maka ngosi nke ngwaọrụ ahụ bụ Septemba 19. Ọ ga-abụ ihe omume a ga-eme n’obodo Chengdu na China. Branddị ahụ n'onwe ya ekesaala akwụkwọ mmado na netwọkụ mmekọrịta China weibo na-ekwupụta ekwentị yana ụbọchị ngosipụta na ya.
Ajụjụ a bụ ma ngosipụta a nke Xiaomi Mi 8 Ntorobịa ga-eje ozi maka iwebata ya n'ahịa ndị China naanị, ma ọ bụ ma ekwentị a ga-ahapụ ụwa niile n'otu oge ahụ. Ebe ọ bụ na afọ a, anyị na-ahụ otú mmalite ahụ na Europe na-emekarị na-eme ọnwa mgbe emechara ya na China.
O yiri ka nke a Xiaomi Mi 8 Ntorobịa ga-akụ ụlọ ahịa na agba dị iche iche. Ndị ahịa ga-enwe ike ịhọrọ oji, ọla edo, ọcha, acha anụnụ anụnụ, pink, acha anụnụ anụnụ, isi awọ, ọlaọcha, na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Nnukwu nhọrọ nke agba, dị obere na ahịa taa.
Anyị nwekwara ozi gbasara ihe ọnụahịa nke Ntorobịa Xiaomi Mi 8 a nwere ike ịbụ, maka ụfọdụ nchapu ọhụụ. Ọ ga-enwe ọnụahịa nke yuan 1.999, nke mgbanwe ahụ bụ ihe dị ka euro 250. O yikarịrị ka mgbe ọ malitere na Europe ọ ga-adị oke ọnụ karị. Mana o n’enyere anyi aka inwe echiche ojoo banyere ihe anyi n’atụ anya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » A ga-enye ndị ntorobịa Xiaomi Mi 8 na September 19